Mimwe yeanonyatso kuzivikanwa emulator yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Android yakanyatso kuwana mukurumbira wakawanda munguva pfupi uye yave imwe yenzvimbo dzinonyanya kushandiswa nharembozha masisitimu nhasi.
Y Izvo hazvisi zvechinhu pasina, nekuti nekuda kwekugona kwayo kukuru uye kuve yakavhurika sosi sisitimu Kune vazhinji vanogadzira munyika avo vakashandisa yavo yega vhezheni yeApple mune akasiyana madhiraivhu aripo pamusika.
Ndiwo muenzaniso weCyanogenmod iro nhasi rine rimwe zita, asi raive rimwe remapurojekiti makuru kutora Android nekuipa iyo yekuwedzera.
Kunyange zvakadaro Android chirongwa chinoshandiswa uye chakaiswa pane nhare mbozhavamwe Mapoka ekuvandudza akashanda kuita ino sisitimu yemakomputa edesktop.
Muenzaniso unoshanda ndeye Android X86, inova iri vhezheni ye Android inokwanisa kuiswa pamakomputa ane 64-bit uye 32-bit processor.
Asi Nhasi tichave tichiziva zvimwe zvinoshandiswa zvinozotibatsira kuti tikwanise kuve neAroid mukati medu system yekushandisa.
Ine Android Virtual Dhivhizheni yakanyatsogadzirirwa kuyedza yako wega kodhi kana uchikodha kubva ku Android Studio.
Iyo yakavakirwa-mukati emulator iri nani pakuyedza ako ega mafomu. Izvi zvinoshanda zvakanyanya kushandisa iyo Android SDK, asi iwe unogona kushandisa iyo emulator zvakazvimirira.
Mifananidzo inotora yakawanda yediski nzvimbo uye inoshandisa yakawanda ndangariro kana ichishandiswa, asi ese mashandiro aripo uye anomhanya zvisina tsarukano.
Nephakeji iyi iwe unogona zvakare kuteedzera kufamba kwefoni, yakaderera bhatiri uye mamwe mamiriro ane hukama nemahara.
Shashlik chirongwa icho chinokwanisa kumhanyisa yemuno Android kunyorera pane yeGNU / Linux inoshanda sisitimu. Kunyangwe izvi zvainge zvatovepo nemaemulators kana Android-yakavakirwa mashandiro masisitimu, inguva yekutanga kuti maapplication akaiswa semapurogiramu akareruka.
Izvi zvinoshandiswa ichiri kushanda uye zvine simba zvine simba uye yakapusa kutanga.
Kana vachinge vaisa, vanokwanisa kuisa maapplication eApple nekutanga iyo Shaslik emulator uye kubatanidza pairi uchishandisa adb.
Zvikumbiro zvinogona kuburitswa zvakananga kubva kudesktop yako. Ivo vanozotaridza kunge zvakajairika mashandiro, asi zvinotora nguva kutanga semuchina chaiwo unofanirwa kutanga pamberi pechishandiso pachawo.
Kuti tiwane chishandiso ichi tinofanirwa kuteedzera rairo dzavanotipa Mune inotevera chinongedzo.
Bhokisi isa iyo Android OS mumudziyo, abstracts kupinda kwehardware uye inosanganisa yakakosha system masevhisi mune yeGNU / Linux system. Imwe neimwe Android application inosangana neyako sisitimu yekushandisa senge chero imwe application yemuno.
Iri svondo zvakanaka pakumhanya madiki mafomu ipapo padesktop yako. Kuisa maapplication eApple, iyo nzira iri nyore ndeyekutsvaga maneja wepakeji woishandisa.
Iyo adb chirongwa chinotaurirana nechero Android yakabatana nekombuta, Anbox ichaita senhare yakabatana nekombuta iyo yainomhanya.
Anbox inovavarira kuve mhinduro yakanakisa yekumhanyisa Android kunyorera paLinux.
Kuti tigoisa chishandiso ichi pahurongwa, zvakaringana kuti isu tine rutsigiro rwekuti tikwanise kumisikidza maapplication eSnap.
Mune terminal tinofanirwa kunyora zvinotevera:
Genymotion ndiwen nekukurumidza uye nyore kushandisa Android emulator kumhanya uye kuyedza ako eApplication.
Iine zvishandiso makumi maviri zvakafanogadzirwa (Nexus, HTC, LG, Motorola, Samsung uye Sony). Iwe unogona zvakare kugadzira yakasarudzika foni / piritsi emulators. Iwe unogona zvakare kuzvisanganisa mu = Android Studio nekuisa iyo Genymotion plugin.
Ichi chishandiso chinomhanya nekukurumidza (kunyangwe iwe uchimhanyisa akawanda madhizaini panguva imwe chete) uye ine mushandisi-inoshamwaridzika interface.
Iyi emulator inogona kudzora masenji sebhatiri, GPS uye accelerometer, mhando uye mashandiro enetiweki, maikorofoni uye iyo yakawanda-yekubata basa. Iyo zvakare ine Java API uye yekuraira turu turu.
Kana iwe uchida kushandisa chishandiso ichi, unofanirwa kutarisa mitengo kana zvirongwa zvainopa pane yayo yepamutemo webhusaiti, sezvo paine akabhadharwa vhezheni uye zvekare yemahara.kubva pane iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Mimwe yeanonyatso kuzivikanwa emulator yeLinux
Andrew Rubio akadaro
Ndine uye ndiri muZorin ... vhezheni ye linux ... kubva pano panogona kunge paine kana pane chimwe chinhu chakafanana nemabhuru atinoshandisa mumawindo .._ kunyangwe ndaizodawo kuziva kana kubva kuUbuntu kune chinhu yakafanana neya bluestacks yandinoshandisa kubva windows ...
Pindura Andres Rubio